ဆူးလေမှာ ဒေါ်လာလဲ၇င် သတိထား… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဆူးလေမှာ ဒေါ်လာလဲ၇င် သတိထား…
ဆူးလေမှာ ဒေါ်လာလဲ၇င် သတိထား…
Posted by gyinkalay on Feb 22, 2011 in Myanma News |7comments
မဟာဗန္ဒုလ လမ်းနှင့် 35 လမ်းထောင့် ဆူးလေ ဘုရားအနီးတွင် အကို ငွေလဲ မလား အစိမ်းလဲမလား..နှင့် ပွဲစားများ၇ှိနေသည်၊ ထိုနေ့ က ဒေါ်လာဈေးမှာ 930 ထိတက်နေ၇ာ…လက်ထဲမှာလက်ကျန်ကလဲ ဒေါ်လာ 200 လောက်၇ှိနေတော့…နှစ်သောင်းလောက်မြတ်တယ်ဆိုပြီး….တစ်ယောက်တည်း…သွားလဲလေေ၇ာ…ဟိုေ၇ာက်တော့….830 ဖြစ်သွားပြီ ဈေးကျသွားတယ်ဘာညာနဲ့ ပြော၇ာ…တော်ပြီမလဲတော့ဘူး..ဆိုပြီးပြန်အထွက် ကုလား..သုံးယောက်က လာပါအကို ကျွန်တော်တို့ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီ….930 နဲ့ ဈေးတည့်သွားကော။ ဒေါ်လာ 200 ဆိုတော့ တစ်သိန်း ရှစ်သောင်း ခြောက်ထောင် နဲ့ ၇ကော…သူက ပိုက်ဆံထုတ်ပြီးကျွန်တော့်ေ၇ှ့ မှာတင်ရေပြတယ်..ဒါပေမယ့် သူေ၇တာမယုံလို့ ကိုယ့်ဟာကို ပြန်ေ၇ပြီး..တစ်သိန်း၇ှစ်သောင်းခြောက်ထောင်ပြည့်အောင်ေ၇ပြီး..အေ၇ာင်းအ၀ယ်တည့်သွားပြီးအိမ်ပြန်လာကော…အိမ်ေ၇ာက်တော့ပြန်ေ၇တော့…တစ်သိန်းသုံးသောင်း နှစ်ထောင်ပဲပါလာပါေ၇ာလား..သေစမ်း ကုလားတော့င့ါကို ဆော်လိုက်ပြီလို့ သိလိုက်၇ကော ဒါပေမယ့်ဘာမှလဲလုပ်လို့ မ၇တော့ဘူးလေ…ပြန်သွားပြောလဲ၇ှိမှာလဲမဟုတ်တော့ဘူး..နောက်မှ သူငယ်ချင်းတွေပြောပြတာက အဲ့ဒီမှာ ကလူလိမ်တွေချည်းပဲတဲ့…ပိုက်ဆံကိုလဲ ခေါက်တဲ့နည်း၇ှိတယ်တဲ့ သူတို့ ခေါက်ထားတဲ့ အုပ်အတိုင်းယူလာရင် ပိုက်ဆံတွေကမပြည့်ဘူးတဲ့…တချို့ ကျတော့ 20 တန်တွေညှပ်ထားတာနဲ့ တစ်ချို့ ကတော့ရဲ နှင့်ကိုင်ပေါက်တာတွေလဲရှိတယ်တဲ့…ရဲတွေလာပြီဘာညာနှင့် ၀ရုန်းသုန်းကားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး…ပိုက်ဆံကို မေ၇ဖြစ်အောင် လုပ်ကြတယ်တဲ့ နောက်မှ ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ပြန်စဉ်းစားတော့ ကိုယ့်ဟာကိုပိုက်ဆံေ၇ပြီးတော့မှ တစ်ယောက်က သေ၇ကွင်းစီးပေးမယ်ဆိုပြီး..ပိုက်ဆံကိုပြန်ယူပြီးလက်လှည့်သွားတာ သုံးယောက်ပတ်လည်ဝိုင်းပြီးတော့…တစ်ပါတ်၇ိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ် ကျွန်တော်လဲ အဲဒီမှာတစ်ခါမှ မလဲဖူးတော့ခံလိုက်၇ပါလေကော…သူများတွေလဲ ကိုယ့်လို မခံရအောင်သတိပေးလိုက်ရတာပါ….
အဲဒီ ဘားလမ်း ငွေလဲတဲ့ လူတွေ ကုလားကော၊ ဗမာ ကော ဘယ်သူမှ မယုံရဘူး၊ လူလိမ်တွေချည်းပဲ။ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ဖူးတယ်။ ဒေါ်လာ တစ်ရာ နှစ်ရာမပြောနဲ့နှစ်ဆယ်လောက် လဲရင်တောင် ရအောင် လိမ်တယ်။ အကောင်းဆုံးက သူတို့ နား မလဲ ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ မတတ်သာတဲ့ အဆုံးလဲမယ်ဆိုရင် သူတို့ ပေးတဲ့ ဆယ်ရွက် တစ်စည်း စည်းတဲ့ပုံစံ ကို အကုန်ဖြည်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် တစ်ရွက်စီပြန်စစ် ပါ။ စစ်လို့ မပြီးမချင်း ကိုယ်ရဲ့ လဲမယ့် ဒေါ်လာ ကို မပေးပါနဲ့ ။ နောက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် အဖေါ်ခေါ်သွားပါ။ နောက် အရေးအကြီးဆုံးက လုံး ၀ အားမနာပါနဲ့ ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အတိုင်း မဖြစ်ရင် ချက်ချင်း အရောင်းအ၀ယ်ရပ်လိုက်ပါ။ သေချာတာကတော့ ဘားလမ်း နားတစ်ဝိုက် နဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဘဏ်ရှေ့ က ငွေလဲသမား တွေ ၉၉ % က လူလိမ်တွေပဲ။
ဟုတ်ပဗျာ ကျွန်တော် လဲ ကြုံဖူးပါတယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် က သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံရေပြီးသေချာ ပြန်စစ်တော့ လိုနေတာသိသွားတယ်လေ အဲဒီတော့မှ အဲဒီကောင်တွေ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မှားသွားတယ် လုပ်တာဗျ. အင်းပိုက်ဆံတော့ စစ်ပြီးသွားပြီး နောက်တစ်နည်းကျန်သေးတယ်။ အဲဒါက ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ FEC ပဲဖြစ်ဖြစ် USD ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို ရေတွက်ပြီးဆိုရင် သတိထားကြည့်သင့်တယ် အောက်ကလက်က ကိုင်ထားပြီးကျန်လက်တစ်ဖက်ကနေ ရေတွက်တယ် အဲဒီအချိန်မှာ အောက်ကလက်က သုံးရွက်လေးရွက်လောက်ကို ခေါက်ပြီး ဖွတ်ထားတတ်တယ်.. သေချာကြည့်နေသင့်တယ်.. တော်တော်ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့လူတွေဗျာ
အကောင်းဆုံးကတော့ စိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာ လဲတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဗျာ..
မူဆယ်မှာ တရုတ်ငွေနဲ့ ဗမာငွေလဲတုန်းက ကြုံဖူးတာတစ်ခုရှိတယ် …
အများကြီးလိမ်တာတော့မဟုတ်ဘူး … ငွေလဲနှုန်းက ကိန်းဂဏန်းတွေရှုပ်တော့ မျက်စိလည်အောင်လုပ်ပစ်တာ …
ှုဥပမာ .. ဗမာငွေ သုံးသိန်းရှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ငါးရာ ပေးရမယ်လို့တွက်ပြီးပြီဆိုပါစို့ … ပိုက်ဆံရေတွက်ပြီးပေးတော့ သုံးသိန်းနှစ်သောင်းရှစ်ထောင်ငါးရာ ပေးလိုက်တယ် … ပိုက်ဆံကိုသေချာရေတွက်ပြီး ယူရင်းကနေ မူရင်းတန်ဖိုးကို မေ့သွားအောင် ခေါင်းမူးသွားတာ …
အဲဒီလိုနဲ့ တစ်ခါခံခဲ့ရဖူးတယ် …
ဟုတ်တယ်..သူတို့တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရင် အားနာနေလို့ကိုမရဘူး..တချို့တွေဆို ကိုယ်ရဲ့ပိုက်ဆံအရင်ထုတ်ပေးမိလို့ ၀ရုံးသုန်းကားဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးယူပြေးသွားတာလဲရှိတယ်လေ..
စိတ်မကောင်းစရာပဲနော် … ပိုက်ဆံ နှစ်ရာလဲလိုက်တာ နှစ်ထောင်ပဲ ရတယ်ဆိုတော့ … တော်တော် ခံပြင်းစရာကောင်းပါတယ် … ။ လက်တလုံးခြား အလှည့်ခံရတဲ့ အပေါ် ကိုယ်ချင်းလည်း စာမိပါတယ် ။ ဟိုးအရင်ကတော့ သူတို့ ငွေရေနည်းတွေ ပိုက်ဆံ စည်းနည်းတွေ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လို့ ဖတ်မိတဲ့ အခါ ဆင်ခြင် မိပါတယ် .. ။ အခုဟာက တစ်နေ့တမျိုး မရိုးအောင် လိမ်နေတဲ့ပုံပဲ … ။
နောက်တစ်ခါ အကြံပေးပါရစေ… ငွေမလဲမီ အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ ပုံတွေကို record လုပ်ထားပါ ။ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တောင် ပြန်သွားချောင်း ရိုက်လို့ ရအောင်လေ ။
အီးတုံး ဆို ပိုက်ဆံလဲရင် ရုံးမှာပဲ လဲပါတယ်… ငွေလဲလှယ်နှုန်း အပြင်ထက်နှိမ်ပေးပေမဲ့ … အလုပ်မရှုပ် သွားစရာမလို ၊ ပြန်ရေစရာမလိုအောင် မှန်တဲ့ အတွက် ရုံးမှာပဲလွယ်လွယ်လဲလိုက်တယ် .. ။
ကျွန်တော့်တုန်းကလဲ ခုလိုအဖြစ်အပျက်ပါပဲ.. ၃၆ လမ်းထဲက Tea ဆိုင်ထောင့် မှောင်မှောင်လေးမှာ ခေါ်သွားပြီး ငွေလဲတာပေါ့.. ကျွန်တော့်ကို စစ်ခိုင်းတော့ ဟုတ်နေတာပဲ.. ပြီးမှ သူတို့က စည်းပေးမယ်ဆိုပြီးယူတယ်.. နောက်တစ်ထုပ်ကို ရေပါပေါ့.. ဒါနဲ့သူတို့က မုန့်ဖိုးလေးပေးပါဦးပြောနေသေးတယ်.. မပေးဘူးဆိုပြီးပြန်လာရင်း လမ်းမှာ ကိုယ့်မှာ ပါလာတဲ့ တစ်သိန်းထုပ်ရယ်၊ သူတို့ဆီက ယူလာတဲ့ တစ်သိန်းထုပ်ရယ် မတူပါလားစဉ်းစားမိပြီး ရေလိုက်တော့ တစ်ထုပ်ကို (၂)သောင်းလောက် လျော့နေတယ်.. သေချာ စေ့စေ့ ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့မှ ပိုက်ဆံကို ညီအောင်ညိ်ှသလိုနဲ့ ခုံစောင်းကနေဖြတ်ချလိုက်တာ.. ပုဆိုးကို ခုံအောက်မှာ ကားထိုင်ထားတော့ ပုဆိုးကြားထဲ ရောက်သွားတာပေါ့.. အဲလိုလုပ်လိုက်တာ မြန်မာ(၃)ယောက်ပါပဲ.. ဒီတော့ အားလုံးတူတူပါပဲ.. ငွေလဲတဲ့ Company မှာလဲတာ ဈေးမှန်ပြီး စိတ်ချရပါတယ်.. နောက်တော့ လမ်း၄၂ လမ်းမှာပဲ သွားလဲဖြစ်တော့တယ်.. (အတွေ့အကြုံ ပြန်ဝေမျှတာပါ)
ဒီလောက်တောင်လူပြောများနေတာ ရဲတွေဘာလုပ်နေလဲမသိဘူး။ အင်းလေ.. အနှိပ်ခန်း၊ ကာရာအိုကေဘား၊ ကလပ်တွေကများဆိုတော့ ဒေါင့်စုံအောင်မကြည့်နိုင်ကြဘူးနဲ့တူပါ့…